Turkiya: Dad ka badan 1,800 oo horey loogu ruqseeyay afgambigii 2016 oo dib loogu celiyay shaqadoodii – Kasmo Newspaper
Turkiya: Dad ka badan 1,800 oo horey loogu ruqseeyay afgambigii 2016 oo dib loogu celiyay shaqadoodii
Updated - January 12, 2018 8:30 pm GMT
London (Kasmo), Mas’uuliinta Turkiga ayaa shaqooyinkoodii dib ugu celiyay shaqaale Dowlo (Civil Servants) ka badan 1,800 oo horey loogu ruqseeyay ololihii lagu nadiifinayay shabakaddii wadaadka Fedhullah Gulen ee lagu tuhunsanaa afgambigii dhicisoobay 2016kii.
Wakaaladda Wararka Anadolu ee Xukuumadda ayaa baahisay in Dikareeto sharci ah lagu soo celiyay 1,823 qof oo shaqaale dowladeed ah, kuwaas oo loo ruqseeyay in ay haysteen adeegga farriimaha qariya ‘By-Lock’ ee qaar ka mid ah xubnihii afgambiga waday isticmaalayeen.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Ankara, Yuksel Kocaman, ayaa 27kii Disembar codsaday sii-deynta 1,000 qofood oo sababtaas darteed u xirnaa, shaqaalaha Dowladda ee dib loo hawlgaliyayna waxaa ku jira 544 (Waxbarashada), 204 (Caafimaadka) iyo 458 (Boliiska).
Wuxuu intaa ku daray in baaritaan qoto dheer lagu ogaaday in 11,480 lambar oo GSM ah, farsamo iyo xog ahaanna isku jaad ah, iyaga oo aan ogayn, lagu xiray qaybta farriimaha qarisa IP By-Lock.
Sida baaritaanka lagu ogaaday, isticmaalka taleefannadaan ayaa si ulakac ah loogu xiray bogga By-Lock, iyada oo la isticmaalayo adeegyo (App) ay curiyeen xubnaha Ururka Gulen, si raad-gadasho ah oo aan loo ogaan dadka dhabta ah ee afgambiga wada farriimahoodana qarinaya.
Maalintii xigtay afgambigii dhicisoobay in ka badan 150,000 oo qof ayaa shaqooyinka laga eryay iyada oo lagu eedeeyay in ay lug ku lahaayeen afgambiga.
9kii Jennaayo, Wasiirka Arrimaha Gudaha Turkiya, Sulayman Soylu wuxuu shaaca ka qaaday in sannadkii 2017 oo qur ah dad gaaraya 48,305 qofood loogu xiray dalka oo idil, iyaga oo lagu tuhmay xiriirkooda shabakadda Gulen.